» Nyi Nay Min အင်တာနက်ဥယျာဉ်
EarlierDownload လုပ်မည့်သူများ မဖြစ်မနေ ဖတ်ပေးပါ။Download လုပ်နည်းကို တချို့ အစိမ်းသက်သက်သမားတွေ မသိဘဲ ခဏခဏမေးနေကြတယ်။ ဒီပို့စ်လေး ကိုတော့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပေးပါဗျာ။ ဒါဆိုရင် တော့ Download လုပ်တာကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ လုပ်နိုင်သွားမှာပါ။ Download လုပ်တာဟာ အားလုံး ဒီပုံစံချည်းပါပဲ။ Host Website တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူညီကြပေမယ့် သဘောတရားချင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ အဲ့တော့ တစ်ခုကို နားလည်သွားရင် တစ်ခြားသော ဆိုက်တွေကနေ Download လုပ်ဖို့လည်း အလိုလို နားလည်သွားမှာ သေချာပါတယ်။ ၁။ မိမိ Download လုပ်မည့် Post ရဲ့ အောက်က Read More button ကို နှိပ်လိုက်ပါ။၂။ ပြီးလျှင် မိမိ Download လုပ်မည့် link တစ်ခုခုကို ရွေးပြီး နှိပ်လိုက်ပါ။ အခုက Solidfiles ကနေ Download လုပ်မှာဖြစ်လို့ Solidfiles ကို နှိပ်လိုက်ပါတယ် ၃။ (၅)စက္ကန့်စောင့်ပေးလိုက်ပါ။ ၄။ Skip AD ဆိုသည့် button လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ၅။ Download လုပ်ဖို့ အစိမ်းရောင် Download button လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ကဲအခုဆိုရင် ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ File ကျလာပြီ ဖြစ်လို့ Start Download ကို နှိ်ပ်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ အောက်မှာ ကျနော် video ဖိုင်နှင့် One2up link ကို Download လုပ်ပြထားပါတယ်။ နားမလည်သေး သူများ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ File ဖြေမည့် Program များ မရှိပါက ဒီမှာ အားလုံးကို စုစည်းပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။Win rar သီးသန့်လိုချင်ရင်တော့ v-5 ကို ဒီမှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။HJ split ဖြင့်ဖိုင်ဖြေနည်းကို ဒီမှာ ဖတ်ရှု့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Video ကော ပုံနဲ့ကော ရှင်းပြထားပါတယ်။ [...]Mon, Jan 05, 2015ညီနေမင်းနေ့စဉ် Kaspersky keys များ (5 Feb 2014)Kaspersky တွေကို ခဏခဏ မေးတတ်ကြလွန်းလို့ မထူးဘူး ဆိုပြီးတော့ အမြဲတမ်း update လုပ်ပေးမယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးမြင်အောင် ထိပ်ဆုံးမှာ ထားလိုက်ပါ့မယ်။ ရက်စွဲတွေကိုတော့ update လုပ်တဲ့ ရက်စွဲကို ပြောင်းပြောင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ version အားလုံးအတွက်အထဲမှာ ပါပြီးသားပါ။ Key ထည့်နည်း ၂ နည်းရှိပါတယ်။ ၂ နည်းစလုံးကို စာအုပ်ကော video ဖိုင်ကော အသစ်ထပ်လုပ်ပြီး ဒီပို့စ်မှာပဲ တင်ပေးမှာပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ link သေနေပြီ မဖြစ်ရအာင်ကို စီစဉ်ထားတာပါ။ Direct link တွေနဲ့ ချည်းပဲ တင်ထားပေးပါတယ်။(5 Feb 2014) ရက်နေ့ kaspersky keys များGoogle DriveKaspersky 2014 သည် key file ဖြင့် ရက်တိုးလို့ မရပါ။ အဲ့အတွက်ကြောင့် Kav2014 (or) Kis2014 သမားများအနေဖြင့် Activation Code ဖြင့် သက်တမ်းတိုးပါ။ အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ Activation Code တစ်ဖိုင်နဲ့တစ်ဖိုင် သက်တမ်းခြင်း မတူပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ခွဲပြီးတော့ တင်ပေးထား ပါတယ်။ အထဲမှာ ၆ လကျော် အထိ သက်တမ်းရှိတဲ့ Activation Code ပါပါတယ်။KAV2014(A) | KAV2014(B) | KAV2014(C) | KAV2014(D) | KAV2014(E) | KAV2014(F) | KAV2014(G) | KAV2014(H)KIS2014(A) | KIS2014(B) | KIS2014(C) ===================================Kaspersky Internet Security 2013 and 2014 (Google Drive) ကို ဒီမှာ ယူပါ။ =================================== Kaspersky Internet Security 2013 ကိုလိုချင်လျှင် ဒီမှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။=================================== ===================================Kaspersky Antivirus 2013 ကိုလိုချင်လျှင် ဒီမှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။=================================== ===================================Kaspersky Keys ထည့်နည်း မသိလျှင် ဒီမှာ လေ့လာပါ။=================================== [...]Thu, Jan 01, 2015ညီနေမင်း★★ HUAWEI C8813 Firmware ★★ HUAWEI C8813 Firmware ကိုတောင်းဆိုထားသူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Title: HUAWEI C8813Listed: 11/28/2013 2:54 amROM Version: ROM Android 4.1.2 DescriptionROM HUAWEI C8813 – ROM Android 4.1.2 LeWaLanguage support: EN/CN ROM install :CWMStep 1: Download the custom card brush ROM copied to an external SD card root directoryStep 2: the shutdown state. While holding down: Power button + volume button + volume key to enter the recovery mode of Brush, enter Wipe,Factory Reset, System and return to recovery main interface Options Brush can.Step 3: Brush complete, restart the phoneကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ။မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Thank You For Downloading And Dont Forget to Clicking Once onaAd Banner.အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ငြာများကို ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ www.mm-knowledge.com★★နည်းပညာမြို့တော်★★ [...]Fri, Apr 25, 2014ညီနေမင်းPhone နဲ့ Video အပျော်တမ်းရိုက်ချင်သူများအတွက် Special Effect များစွာပါဝင်တဲ့ - Cinema FV-5 v1.11 APKAndroid User တွေအတွက် ဒီတစ်ခေါက်တင်ပေးမှာကတော့ Video တွေကို Effect အမိုက်စားတွေနဲ့ ရိုက်နိုင် တဲ့ Cinema FV-5 ဆိုတဲ့ Application လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တော်တော်များများတင်ပေးနေကြ တာက Photo Camera တွေအတွက်ဘဲတင်ပေးနေကြပြီး Video Camera Application တင်တာနည်းလို့ Video ၀ါသနာပါသူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Video ရိုက်ကူးရာမှာလည်း အလင်းအမှောင်နဲ့ Color များကို လိုအပ်သလို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ နမူနာအနေနဲ့ အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြ ထားပါတယ်။ Android OS 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. " > ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။** အဆင်ပြေပါစေဗျာ။Downloadwww.pyaephyo.com [...]Fri, Apr 25, 2014ညီနေမင်း★★ Adobe Dreamweaver CS6 Full Version 12 build 5808 ★★Adobe Dreamweaver ဆော့စ်ဝဲကတော့ PHP, ColdFusion, ASP.NET စသည်တို့ကို supports လုပ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် bloggers ,HTML tags , web designing တွေကိုမိမိကြိုက်သလိုရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။web designers တွေအတွက်အသုံးဝင်သည့်အပြင် FTP နှင့် CSS3 translation ရတဲ့အတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။full ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပုံတွေနဲ့ပြထားပါတယ်။Adobe Dreamweaver CS6 isasoftware for web designing. With the help of Adobe Dreamweaver, the bloggers do not have to deal with the HTML tags are complicated, because everything just clicks alone. Dreamweaver is not only intended by the web designers, but Dreamweaver can also be used by programmers to create web pages interactive, since Dreamweaver supports PHP, ColdFusion, ASP.NET and others.New CS6 Features:-Improved FTP perfomance-Updated Live View-Updated multiscreen preview panel-CSS3 translation-PhoneGap Support-Enhanced jQuery mobile supportInstallation InstructionExtractRun SetupFollow The Instructions Providedကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ။မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Thank You For Downloading And Dont Forget to Clicking Once onaAd Banner.အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ငြာများကို ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ www.mm-knowledge.com★★နည်းပညာမြို့တော်★★ [...]Fri, Apr 25, 2014ညီနေမင်း★★ The Amazing Spider-Man2v1.0.0i [apk+obb] ★★The Amazing Spider-Man2ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ် 1.2G ကိုထက်ဝက်မျှဖိုင်ချုံ့ပေးထားပါတယ်။ဖိုင်ခွဲ6ဖိုင်ခွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 1 ဖိုင်ကို 100Mb ပဲရှိပါတယ်။Obb ဖိုင်ကို SD/Android/Obb ထဲထည့်ပြီး Apk ကိုအင်စတောလုပ်ပြီးကစားနိုင်ပါပြီ။New York is under threat fromacity-wide crime spree and only our hero Spider-Man can stop it! Standing in his way are Venom, the Green Goblin, Electro and other nefarious villains. Can Spider-Man restore order and safety to Manhattan?!THE OFFICIAL GAME OF THE AMAZING SPIDER-MAN2MOVIEWeb-sling, wall-climb and web-shoot as the fast and quick-witted Spider-Man!An original story expands on the highly anticipated Marvel film!Go beyond the Sony movie and into the comics with new characters such as Black Cat and Screwball.Unlock Spider-Man suits such as Symbiote Spider-Man, Iron Spider and Ultimate Comics Spider-Man!Face off against famous villains such as Venom, the Green Goblin, Electro, and Kraven the Hunter!High-quality voice acting and 3D cinematic action cutscenes bring the movie experience to life!ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ။မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Thank You For Downloading And Dont Forget to Clicking Once onaAd Banner.အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ငြာများကို ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။PART 1 | PART2| PART3PART4| PART5| PART6www.mm-knowledge.com★★နည်းပညာမြို့တော်★★ [...]Fri, Apr 25, 2014ညီနေမင်း★★ ဧပြီလ(၂၅)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနေ့ စဉ် သတင်းစာ ★★ မြန်မာ့အလင်းနေ့စဉ်သတင်းစာကိုဖတ်ရှု့ကြတဲ့ ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ သူငယ်ချင်းများအတွက်ဧပြီလ (25) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနေ့စဉ်သတင်းစာကို Full Screen အဖြစ်တိုက်ရိုက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပြီး ၊ ညာဘက်ထောင့်အပေါ်တွင်ဒေါင်းလော့စ်ကိုနှိပ်ခြင်းဒေါင်းလော့စ်ရယူနိုင်ပါသည်.ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ။မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Thank You For Downloading And Dont Forget to Clicking Once onaAd Banner.အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ငြာများကို ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ www.mm-knowledge.com★★နည်းပညာမြို့တော်★★ [...]Fri, Apr 25, 2014ညီနေမင်းInternet Download Manager 6.19 Build7(No Need Patch,No Need Crack Just Install) Internet Download Manager နဲ့ အမြဲ ပြဿနာတတ်နေကြသူများအတွက် တကယ်အဆင်ပြေစေမဲ့ Just Install Version လေးပါ... နောက်ဆုံး Update ဖြစ်တဲ့ IDM 6.19 Build7ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. Patch , Crack တွေ အသုံးပြုစရာမလိုပါဘူး... တင်ပေးလိုက်တဲ့ Idman619build7.exe ဖိုင်လ်ကို Install ပေးလိုက်ရုံနဲ့ Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်းသုံးလို့ ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်..။ Patch , Crack မသုံးတတ်သူတွေအတွက်လည်း အရမ်းကို အဆင်ပြေသွားစေမှာပါ..။ ဒီ Version ကို Install မပြုလုပ်ခင် အရင် ရှိနေတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ပစ်ပါ..။ပြီးလျှင် အောက်ဖေါ်ပြပါ နည်းလမ်းအတိုင်း Install ပေးလိုက်ပါ.. (ပုံတွေ သေးနေရင် ပုံကို Click ပါ) နံပါတ် (1) ကို Click နှစ်ချက်နဲ့ Run လိုက်ပါ.. နံပါတ် (2) မှာ နှစ်သက်ရာ နာမည် တစ်ခုခုရေးပါ..နံပါတ် (3) OK ကိုနှိပ်ပါ..နံပါတ် (4) မှာ နှစ်သက်ရာ နာမည် တခုခုရေးပါ..နံပါတ် (5) OK နှိပ်ကိုပါ..နံပါတ် (6) ကို နှိပ်ပြီး Next အဆင့်ဆင့်နဲ့ Install ပေးလိုက်ပါ...Fnish ကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် အောင်မြင်စွာ Install လုပ်ဆောင်ပြီးစီးသွားပါပြီ..။အထက်ပါ ပုံအတိုင်း Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်း သုံးလို့ ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.. Serial Key,Patch,Crack တွေ မလိုတော့ပါဘူး..။ Click Here To Downloadအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဝင်းကမ္ဘာကျော်www.winkabarkyaw.net [...]Thu, Apr 24, 2014ညီနေမင်းAndroid OS 4.3 အထိ Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့ - RootGenius v1.9.2 For PCAndroid User တွေနဲ့ Phone Service သမားတွေပါ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Root Tool လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ RootGenius v1.9.2 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီRoot Tool လေးက Android OS 2.3 မှ 4.3 အထိ Root ဖောက် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Huawei, ZTE, Samsung & HTC ပြင် အခြား Brands 300 အထက်ကို Support လုပ်နိုင် ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။Root Wizard features　1 covering all current Android vulnerabilities integrated sets of ROOT engine 2. supports Huawei, ZTE, Samsung and HTC and other domestic brands, covering Android 2.3-4.2 more than 300 models 3. safety risk-free, easy access ROOT privilegesSoftware features: small, but very strong --- only 2M size, and for the green version, Root capabilities favorably, now supports more than 300 modelsakey Root simple, clear ---- link mobile phones, click Root, step, Root so simple you can post Root ---- brush into third-party ROM, make your phone more personality; streamlined boot items, uninstall stubborn own applications!Update log　1 Root significantly enhance the speed of 2. enhanced support for 2.3.x and 4.3 systems ROOT ability 3. Updated ROOT authorization management component to address the 4.3 version of the Samsung models ROOT incomplete question 4. supports Samsung S5, OPPO Find7, the latest machine Typeakey ROOT** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ [...]Thu, Apr 24, 2014ညီနေမင်း★★Coloring Screen isaLive Wallpaper Version : 3.1.0 Apk (All Android)★★သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Coloring Screen Live Wallpaper လန်းလန်းလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။color effects ပေါင်း 20 ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။day/night effects, red, green, blue, yellow, orange, cold အစရှိသဖြင့်မိမိကြိုက်ရာကို Wallpaper မှာထားနိုင်ပါတယ်။ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Animated sun, moon, rain, snow, stars, clouds, lightning, fog and frost မိမိကြိုက်ရာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။Android : 2.1 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Coloring Screen isaLive Wallpaper which makes ANY background look exactly you want by applying various color effects and photo filters. Whenever you get boring with any wallpaper, Coloring Screen will make it fresh!Choose from more than 20 color effects and photo filters including day/night effects, red, green, blue, yellow, orange, cold and warm filters, autumn, winter, spring and summer adjustments, classic black&white, sepia, neon and more!Every effect can be manually adjusted. You can control brightness, contrast and saturation, apply color blends, mix colors, change hue, add lighting/glow effects, use overlays and more. You can even make your wallpaper look 3D with special 3D panoramic view feature.All effects and animations could be applied to ANY image from your gallery, whether it isareal photo or your favorite wallpaper. Full HD ready, no quality loss!Coloring Screen works well on both phone and tablet devices, uses low [...]Thu, Apr 24, 2014ညီနေမင်း★★ Lenovo K900 Firmware & How to Root ★★Lenovo K900 Firmware ကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။Firmware နှင့်အတူ Root လုပ်ချင်သူတွေအတွက်ဘယ်လို root လုပ်ရလည်းဆိုတာကိုပါအောက်မှာပြထားပါတယ်။Root လုပ်နည်းကိုတော့ ဒီလင့် မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ။မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Thank You For Downloading And Dont Forget to Clicking Once onaAd Banner.အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ငြာများကို ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ www.mm-knowledge.com★★နည်းပညာမြို့တော်★★ [...]Thu, Apr 24, 2014ညီနေမင်း★★ Qimage Ultimate 2014.136 Portable ★★ဒီကောင်လေးကတော့ photo printing software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။photo tools, editing tools, job logging, custom layout စသည့်အပြည့်အစုံပါဝင်ပြီး even raw photos and 3D photos တွေကိုမြန်ဆန်စွာတည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ဓါတ်ပုံတွေကိုနောက်ခံဘက်ဂရောင်းပြောင်းခြင်း ၊ လိုချင်သောဆိုဒ်ကိုဒီဇိုင်းမျိုးစုံထုတ်နိုင်ပါတယ်။အလင်းအမှောင်ကကစလိုသလိုချိန်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေများပြားတာကြောင့်အောက်မှဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။Protable လေးဖြစ်သောကြောင့်ပေါ့ပါးပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။Qimage Ultimate is the most advanced photo printing software in the world. Continuing the Qimage legacy that has seen more thanadecade of experience and innovation in photographic printing, it is the most frequently recommended photo printing software on the web. Used by everyone from casual shooters to professional photographers and studios, Qimage Ultimate is for people who recognize the importance of quality when it comes to photographic prints as they are the culmination of your efforts behind the lens.Uncompromising in its quality and control, Qimage Ultimate combines incredible power and performance withapurpose built interface designed specifically for photo printing. Once you see how easy it is to fly through print jobs, sizing on the fly, refining and correcting photos (even raw photos and 3D photos) as you go, you'll wonder why the other tools make it so difficult.Whether you print your own photos or you are prepping photos to be printed online or in-store, you need Qimage Ultimate to [...]Thu, Apr 24, 2014ညီနေမင်းKeylogger ရန်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ - Spyshelter Firewall v3.0 + Loaderအခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Software လေးကတော့ Spyshelter Firewall ဆိုတဲ့ Software အသစ်လေးပါ။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ Keylogger တွေရဲ့ ရန်မှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရဲ့ Account တွေရဲ့ User Name & Password တွေ ၊ မိမိကွန်ပြူတာထဲမှာရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကိုလုံခြုံစိတ်ချချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Spyshelter Firewall လေးကိုအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ Spyware , Keylogger , Trojan အပြင်အခြားသော Virus များစွာကိုလည်း Remove လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင် အောက် မှာ မူရင်းဆိုဒ်ကနေရှင်းပြထားတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။Hackers today can use near limitless methods to steal your personal information and affect your life. By adding the SpyShelter Firewall software to your digital security plan, your information will be safe and secure, guaranteed. By knowing that your information is secure, you can turn your efforts towards family, friends, work, or even some much needed relaxation time.The SpyShelter Firewall providesalong list of features to protect your information that include:Quality Features Of SpyShelter Firewall:Provides incoming/outgoing network requests detectionHigh quality DDE requests catchingIPV6 supportImportant COM objects protectionHigh Extended files/folders protectionExtended registry protectionExtended Inter-process communication protectionApplication protection upon executionProactive protection are able to detect any virus, spy program, keylogger or trojan attempts to steal your private informationProtect your passwords, chat, and credit card numbersProactive protection gives you ability to detectanewly created malicious software that is not detectable by third-party antivirus productsDoesn’t need to checkasignature [...]Wed, Apr 23, 2014ညီနေမင်း★★ Keyboard Color Theme Version : 1.1 Apk (All Android) ★★Keyboard Color ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေကြိုက်သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။install လုပ်ရလွယ်ကူပါတယ်။install လုပ်ပြီးတာနဲ့ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာကနေမိမိကြိုက်ရာကို “Set as Active Theme" နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ Android : 2.2 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။We know you are serious about how your smartphone looks, that is why we are inahurry to bring you our latest release: KEYBOARD COLOR! DOWNLOAD Keyboard Color NOW and watch your smartphone come alive with the electric colors put together especially for you by our brilliant designer team!- To install, follow the3easy steps: open after download, press “Set as Active Theme” and select the theme from the following page!- The awesome HD screenshots we prepared will show you just how incredible this theme is!- This theme uses GO Keyboard, so if you do not have it installed, you will be redirected toadownload page!- The menus for this theme come with 48 different language translations so you can enjoy it anywhere you come from!Contact us at themesonlyex@gmail.com with any suggestions or questions you have and keep visiting to see our latest releases and surprises!Size : 1.6MRequires Android : 2.2 and upကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ။မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Thank You For Downloading And Dont Forget to Clicking Once ona[...]Wed, Apr 23, 2014ညီနေမင်း★★Smart Auto Call Recorder Version : 1.0.25 Apk (All Android)★★အ၀င် Call တွေကို record လုပ်ချင်သူတွေအတွက် Version : 1.0.25 အသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေး လိုက်ပါပြီ။မိမိ record လုပ်ယူလိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို record button နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။automaticallyrecording လုပ်ပေးနေမှာပါ။Android : 2.2 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။When you still want to record the call, do you press the record button?Now, the smart recording automatically.When I can not remember the calls itatry.When you want to hear again the voice of the lover.When you want to right and wrong.If you use this app, then your life will be smart.Note : Galaxy Nexus mobile phone does not have the capability of recording. This is not supported.Size : 3.6MRequires Android : 2.2 and upကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ။မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Thank You For Downloading And Dont Forget to Clicking Once onaAd Banner.အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ငြာများကို ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ www.mm-knowledge.com★★နည်းပညာမြို့တော်★★ [...]Wed, Apr 23, 2014ညီနေမင်းBrowser တွေပေါ်က မလိုအပ်တဲ့ Toolbar တွေကို ရှင်းပေးမဲ့ Soft4Boost Toolbar Cleanerအင်တာနက် Browser တွေမှာ မလိုအပ်တဲ့ Toolbar တွေ Add On တွေ မြင်မကောင်းအောင် ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာမျိုးတွေ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်... ဒီလို ဖြစ်ရတာဟာ Free Software တွေ စမ်းသပ် Install ပြုလုပ်ရင်း ၊ Ads ကြော်ငြာတွေ နှိပ်မိရင်းက အလိုလျှောက် စက်ထဲကို ဝင်သွားတာပါ... ဒီ Toolbar တွေ ဝင်လာပြီဆိုရင် Browser တွေရဲ့ Home Page မှာ အရင်လို Google Home ထားမရခြင်း New Tab ခေါ်ရင်လည်း Google Search နဲ့ မပွင့်တော့ခြင်း စ,တာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတတ်ပါတယ်... မလိုအပ်လို့ ထုတ်ပစ်ပြန်တော့လည်း တော်ရုံ ထုတ်မရတတ်ပါဘူး .. ခု အဲ့ဒီ ပြဿနာကို ဒီ Software လေးက အလွယ်တကူ ဖြုတ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာပါ... အသုံးပြုပုံက အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်.. ဖွင့်ထားတဲ့ Browser တွေ အရင်ဆုံး ပိတ်ထားပါ Software ကို Click နှစ်ချက်နဲ့ Run ပါ ပုံပါအတိုင်း ပေါ်လာရင် Refresh ကို နှိပ်ပါ .. မလိုအပ်တဲ့ Tool Bar တွေ Add On တွေကို ရွေးပြီး Remove ပေးပါ.. စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ..။Soft4Boost Toolbar Cleaner isahandy application that you can use to find and remove browser plugins, as well as third-party software like toolbars or other apps.The program comes withaclean GUI that will make it possible for you to quickly performasystem scan and identify any unwanted components that may clog the functioning of the PC. Click Here To Downloadဝင်းကမ္ဘာကျော်www.winkabarkyaw.net [...]Wed, Apr 23, 2014ညီနေမင်း★★ Sony Products Multikeygen v2.5 Keygen and Patch Only ★★Sony Products Keygen and Patch များကိုရှာပေးပြီး Full ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆော့စ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာသူလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆော့စ်ဝဲအမျိုးအစားတွေကိုရေးထားပါ။လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းပြီးသိမ်းထားလိုက်ပါ။အသုံးပြုနည်းကိုလည်းဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာရေးထားပါတယ်။This release works for the following softwares:* moviEZ HD 1.0 Series* SpectraLayers Pro 1.0 Series* Sound Forge 9.0 Series* Sound Forge 10.0 Series* Sound Forge Audio Studio 9.0 Series* Sound Forge Audio Studio 10.0 Series* DVD Architect Pro 4.5-5.0 Series* DVD Architect Pro 5.2 Series* DVD Architect Pro 6.0 Series* DVD Architect Studio 4.5 Series* DVD Architect Studio 5.0 Series* Vegas Pro 8.0 Series* Vegas Pro 8.1 (64 bit) Series* Vegas Pro 9.0 (32 and 64 bit) Series* Vegas Pro 10.0 (32 and 64 bit) Series* Vegas Pro 11.0 (32 and 64 bit) Series* Vegas Pro 12.0 (64 bit) Series* Vegas Movie Studio 8.0 Series* Vegas Movie Studio 9.0 Series* Vegas Movie Studio Platinum 8.0 Series* Vegas Movie Studio Platinum 9.0 Series* Vegas Movie Studio HD 9.0 Series* Vegas Movie Studio HD 11.0 Series* Vegas Movie Studio HD Platinum 10.0 Series* Vegas Movie Studio HD Platinum 11.0 Series* Vegas Movie Studio Platinum 12.0 (32 and 64 bit)Series* ACID Music Studio 7.0 Series* ACID Music Studio 8.0 Series* ACID Music Studio 9.0 Series* ACID Pro 7.0 Series* ACID Pro 6.0d (Build 363)* CD Architect 5.2c (Build 214)* Cinescore 1.0c (Build 271)* Photo Go 1.0b [...]Wed, Apr 23, 2014ညီနေမင်းဓါတ်ပုံများကို ပြုပြင်နိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ - Pho.to Lab PRO - Photo Editor v2.0.119 ApkAndroid Phone ထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Application လေးတင်ပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ ဓါတ်ပုံတွေကို နောက်ခံ Background များပြောင်းခြင်း ၊ Color Effect များထည့်ခြင်း ၊ အသင့်ပါဝင်ပြီး သား Frame များထည့်ခြင်း ၊ အပြင်အခြားသော Feature ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြု လို့ကောင်းတဲ့ Editing Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးထားပြီးသား ပုံတွေကိုလည်း အရည်သွေး မှီတဲ့ ရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. " > ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။** အဆင်ပြေပါစေဗျာ။Downloadwww.pyaephyo.com [...]Wed, Apr 23, 2014ညီနေမင်း★★ Internet Download Manager IDM 6.19 Build7Final + Crack ★★Apr- 18 - 2014 နေ့ကထွက်လာတဲ့ IDM 6.19 Build7Final လေးကို Full ဖြစ်စေရန် Serial + Crackကိုသုံးပြီးဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရလည်းဆိုတာ Movie နဲ့အတူရှင်းပြထားပါတယ်။ပုံတွေနဲ့တင်ပြရင်မရှင်းမှာစိုးလို့ movie လေးကိုကြည့်ပြီး Full ဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။မလုပ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်နောက်ဆိုရင်အသုံးပြုတတ်သွားမှာပါ။Internet Download Manager (IDM) isatool to increase download speeds by up to5times, resume and schedule downloads. Comprehensive error recovery and resume capability will restart broken or interrupted downloads due to lost connections, network problems, computer shutdowns, or unexpected power outages. Simple graphic user interface makes IDM user friendly and easy to use.Internet Download Manager hasasmart download logic accelerator that features intelligent dynamic file segmentation and safe multipart downloading technology to accelerate your downloads. Unlike other download managers and accelerators Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during download process and reuses available connections without additional connect and login stages to achieve best acceleration performance.Internet Download Manager supports proxy servers, ftp and http protocols, firewalls, redirects, cookies, authorization, MP3 audio and MPEG video content processing. IDM integrates seamlessly into Microsoft Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2, and all other popular browsers to automatically handle your downloads. You [...]Wed, Apr 23, 2014ညီနေမင်း★★ Lenovo A850 Firmware ★★Lenovo A850 Firmware တောင်းဆိုထားသူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ။မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Thank You For Downloading And Dont Forget to Clicking Once onaAd Banner.အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ငြာများကို ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ www.mm-knowledge.com★★နည်းပညာမြို့တော်★★ [...]Wed, Apr 23, 2014ညီနေမင်း